Sunday August 27, 2017 - 20:31:50 in Wararka by Super Admin
Eeyaaley waa magac dhawaan soo ifbaxay oo loogu magacdaray kooxda cusub ee dabadhilifka ah ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Magacaan ayaa soo shaac baxay kadib markii maamulka Farmaajo ee Muqdisho uu Eeyo fara badan soo dhigay qaar ka mid ah waddooyinka magaalada Muqdisho.
Maamulkan shisheeye kalkaalka ah ee ka jiro Muqdisho ayaa ku tuntay wax kasta oo cizzi iyo sharaf ah oo ay Umaddan lahayd, wuxuuna ugu dambeyntii bilaabay adeegsiga Eeyo u howlgalaya sida ciidamo oo kale oo si toos ah u baaraya dadka.
Koontaroolka Siinka-Dheer oo ah albaabka koonfureed ee laga soo galo magaalada, Islamarkaana marin u ah bulshada isaga kala gudbeysa caasimadda iyo gobolada koonfurta Soomaaliya iyo Gaaroonka diyaaradaha Muqdisho waxay ay kamid yihiin meelaha sida joogtada ah ay kaga howlgalaan Eeyo Nijaas ah oo loogu tala galay iney nijaaseyaan Muslimiinta daahirka ah iyo hantidooda xalaasha ah.
Sida aan wada ognahay eygu waa Nijaas aan marna daahir noqoneynin islamarkaana meesha uu taabto la nadiifiyo 7 jeer oo mar kamid ah la isticmaalayo Carro Hadaba iyadoo sidaas ay tahay ayay kooxda reergalbeedku garab taagan yahay ee Muqdisho bilowday in ay u wakiishaan howllo xasaasi ah oo keeni kara isdhexgal iyo isku milmid ay isku milmaan Eeyaha iyo dadka Muslimiinta taas oo dhaawac weyn u keeni karta nadaafadooda iyo midda hantidooda.
Askari Boolis ah iyo Eey oo si wadajir ah u baaraya Boorso gudaha garoonka Muqdisho
Siinka dheer waxaa ku yaala Bar-Koontarool oo lagu baaro dadka, waxaana bulshada ku nool Sh/hoose iyo deegaanada ku xeeran Muqdisho ee sida joogtada ah usoo shaqa tagay magaalada Muqdisho ay ku qabaan dhibaato xooggan.
Laakiin sheekada xiisaha badan ayaa ah in Eeyo tiradoodu gaareyso ilaa saddex Eey ay kamid yihiin ciidamada ka howlgala Koontaroolkaas kuwaas oo si joogta ah u baara dadka iyo gaadiidka waaweyn oo xitaa ay ku jiraan gaadiidka Khudaarta taasi oo shaki badan gelin karta faya dhowrka caafimaad ee malaayiyiinta qof ee iibsata khudaartaasi.
Waxyaabaha la yaabka leh ee aan maqlay waxaa ka mid ah in Eeygu uu qiyaarkiisa leeyahay haddii uu hurdana aan hurdada laga kicin Karin ilaa uu iskiisa usoo kaco!.
Marka la gaaro 8:30 oo fiidnimo ayuu Eygu shaqada ka baxaa sida u jadwaleysan, wixii xiligaasi ka danbeeyana ma jiro wax gaadiid ah oo ka gudbi kara Koontaroolka oo xitaa haddii uu ka yimaado gobol fog halkaas ayuu seexanayaa, mana loo aabayeelayo rakaabka uu wado xitaa haddii ay ku jiraan dad nagul ama xanuunsan.
Eeyuhu waxay leeyihiin gaadiid waardiye ah oo gaaraya ilaa 3 gaari oo mid ka mid ah uu gashaaman yahay. Eeygu marka uu wax ‘baarayo’ waxaa wada askari Murtad ah kaasi oo uu korkiisa taataabanayo dan iyo heelana aan ka lahayn in uu Eey taabtay iyo in kale. Dad badan ayaa Eeyahaas dartood ku muteystay ciqaab.
Haweeney ka mid ah Muslimiinta ayaa ka dib markay iskaga baqday Eygu in uu jirkeeda taabto ku dhufatay kob ay sidatay waxayna ku mutaysatay Ciqaab ah in ay qoraxda fariisato in muddo ah ilaa markii dambe ay u yimaadeen maleshiyo kale oo dalbaneysay in la cafiyo.
Waxa lagu heystana waa kaliya in ay iska yureysay Eey Nijaas ah oo ay jirkeeda uga baqday!.
Sidoo kale Eyga waxaa ciqaab ku muteystay wiil dhalinyaro ah oo inta layaabay askarta ridada iyo Eeyaha isdhex fadhiya sawirro ka qaaday.
Sidaas si la mid ah waxaa Airport-ka magaalada Muqdisho ka howlgala tiro Eeyo ah iyo Murtadiin kale oo ay Eeyuhu wada shaqeyn kala dhexeeyso. Sida dad badan ii sheegeen Eyaha ayaa carabkooda nijaaska ah iyo dhareerkooda ku wasaqeynaya boorsooyinka ay wataan dadka rakaabka ah ee ka duulaya garoonka. Gumeystaha reer galbeedka ee sida dadban u maamula dalka ayaa howshan u soo tababaray dad aan damiir iyo islaamnimo midna lahayn kuwaas oo ku dhiiraday wax badan oo meel uga dhacaya sharafta iyo qiimaha Umaddan.
Eey Nijaaseynaya dhar ay muslimiintu leeyihiin.
Bulshada Muqdisho ayaa dhibane u ah wax yaabo badan oo lagu sheegay in amniga lagu sugayo balse Umadda u horseeday damiir xumo iyo dulinimo hor leh. Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii maleeshiyaatka Soomaalida ay gabi ahaanba Dhagxaan ku xireen wadooyinka si ay u ilaaliyaan naftooda iyo mida madaxdooda taas oo keentay in magaaladu ay xabsi kor ka feydan ku noqotay dadka Muslimiinta.
Dowladu waxay ku doodaa in Eeyuhu ay kaalin muhiim ah ka qaataan ka hortagga amni darada iyo qaraxyada, ayna xaqiijiyeen wax aysan xaqiijin Ciidamada AMISOM, maleeshiyaatka Soomaalida iyo hay’adaha sirdoon ee Soomaalida iyo kuwa shisheeye balse waxaa isweydiin mudan taas ma arin dhab ah baa mise waa dhalanteed?.
Haddii Eeyuhu ay Siinka Dheer u joogaan ka hortagga qaraxyada Shabaab ee Muqdisho, Maanta ayaa ugu dambeysay Qarax gaari ayaa ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama oo ah wadada Kaliya ee ay ku dhaq-dhaqaaqaan madaxda dowlada iyo kuwa shisheeye. halkaas Eeyaha, maleeshiyaatka iyo Jawaasiista dhamaantood wey dhooban yihiin hadana wey ku guuleysan waayeen in gaadiidka miineysan ay ka ilaaliyaan wadada.
Haddii sidoo kale ay garoonka Muqdisho u joogaan ka hortagga qarxiyo lala beegsado diyaaradaha, Waxay Al-Shabaab bishii February ee sanadkii hore dharaar cad qarax saartay diyaarad ka duushay Muqdisho mana hor istaagin Eeyaha iyo qalabyada amni ee yaalla garoonka.
Marka Haddii intaas oo dhan ay ka hortagi waayeen kuna tunteen Akhlaaqdii, Qiyamkii iyo nadaafaddii dadka, Soo arintu uma muuqato aafo lala soo maagay Umadda oo ujeedo kale laga leeyahay!!
FG: Aragtida Maqaalka waxay gaar u tahay qoraaga, loomana tiirin karo SomaliMeMo